Akụkọ Bible: Jọn Emee Jizọs Baptizim - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
LEE nduru ahụ ka ọ na-ebekwasị n’isi nwoke a. Nwoke ahụ bụ Jizọs. Ọ gbaala ihe dị ka afọ iri atọ ugbu a. Nwoke ahụ ya na ya nọ bụ Jọn. Anyị amụwo ihe banyere ya. Ì chetara oge Meri jere ileta Elizabet onye ikwu ya, nwa nọ n’afọ Elizabet ewee wụlie elu n’ọṅụ? Nwa ahụ nọ n’afọ mgbe ahụ bụ Jọn. Ma, gịnị ka Jọn na Jizọs na-eme ugbu a?
Jọn ka mikpusịrị Jizọs n’ime Osimiri Jọdan. Ọ bụ otú ahụ ka e si eme mmadụ baptizim. A na-ebu ụzọ emikpu onye ahụ n’ime mmiri, ma kulitezie ya. Ebe ọ bụ na nke a bụ ihe Jọn na-eme ndị mmadụ, a na-akpọ ya Jọn Onye Na-eme Baptizim. Gịnịzi mere Jọn ji mee Jizọs baptizim?
Jọn mere ya n’ihi na Jizọs bịara rịọ Jọn ka o mee ya baptizim. Ndị Jọn na-eme baptizim bụ ndị chọrọ igosi na ihe ọjọọ ndị ha mere wutere ha. Ma ọ̀ dị ihe ọjọọ ọ bụla Jizọs mere nke ọ ga-egosi mwute maka ya? Mba, Jizọs emeghị ihe ọjọọ ọ bụla, n’ihi na ọ bụ Ọkpara Chineke nke si n’eluigwe bịa. E nwere nzube dị iche mere Jizọs ji rịọ Jọn ka o mee ya baptizim. Ka anyị hụ ihe bụ́ nzube ya.
Tupu Jizọs abịakwute Jọn n’ebe a, ọ bụ kapịnta. Kapịnta bụ onye na-eji osisi emepụta ihe, dị ka tebụl na oche. Josef di Meri bụ kapịnta, ọ kụzikwaara Jizọs ọrụ kapịnta. Ma Jehova eziteghị Ọkpara ya n’ụwa ịbụ kapịnta. O nwere ọrụ pụrụ iche ọ chọrọ ka ọ rụọ, oge eruwokwa ka Jizọs malite ịrụ ya. Iji gosi na ọ bịawo ime uche Nna ya, Jizọs rịọrọ Jọn ka o mee ya baptizim. Nke a ọ̀ dị Chineke ezi mma?
Ee, ọ dị ya, n’ihi na mgbe Jizọs si na mmiri pụta, olu si n’eluigwe kwuru, sị: ‘Nke a bụ Ọkpara m, onye ihe ya dị m ezi mma.’ Ọzọkwa, o yiri ka eluigwe ò meghere, nduru a wee fedata ma bekwasị n’isi Jizọs. Ma n’agbanyeghị na o yiri nduru, ọ bụghị nduru nkịtị. Ọ bụ n’ezie mmụọ nsọ nke Chineke.
Jizọs nwere ọtụtụ ihe ọ ga-echebara echiche ugbu a, n’ihi ya, o jere n’ebe ndị mmadụ na-anọghị, nọrọ ebe ahụ ruo ụbọchị iri anọ. Setan wee bịakwute ya n’ebe ahụ. Ugboro atọ ka Setan nwara ime ka Jizọs mee ihe megidere iwu Chineke. Ma Jizọs emeghị ya.
Mgbe nke ahụ gasịrị, Jizọs lọtara wee zute ndị ikom ndị ghọrọ ndị mbụ na-eso ụzọ ya, ma ọ bụ ụmụazụ ya. Aha ụfọdụ n’ime ha bụ Andru, Pita (onye a na-akpọkwa Saịmọn), Filip na Nataniel (onye a na-akpọkwa Batọlọmiu). Jizọs na ụmụazụ ọhụrụ ya ndị a gawara ógbè Galili. Na Galili, ha kwụsịrị na Kena, obodo Nataniel. Ọ bụ n’ebe ahụ ka Jizọs gara nnukwu ememe alụmdi na nwunye, wee rụọ ọrụ ebube mbụ ya. Ị̀ ma ihe ọ bụ? O mere mmiri ka ọ ghọọ mmanya.
Matiu 3:13-17; 4:1-11; 13:55; Mak 6:3; Jọn 1:29-51; 2:1-12.
Ole ndị bụ ndị ikom abụọ a nọ na foto a?
Olee otú e si eme mmadụ baptizim?
Olee ụdị ndị Jọn na-eme baptizim?
Olee ihe pụrụ iche mere Jizọs ji gwa Jọn ka o mee ya baptizim?
Olee otú Chineke si gosi na Ya nwere obi ụtọ maka baptizim Jizọs mere?
Gịnị mere mgbe Jizọs pụrụ gaa n’ebe ndị mmadụ na-anọghị ruo ụbọchị iri anọ?
Olee ụfọdụ n’ime ndị mbụ ghọrọ ụmụazụ, ma ọ bụ ndị na-eso ụzọ Jizọs, gịnịkwa bụ ọrụ ebube mbụ Jizọs rụrụ?
Gụọ Matiu 3:13-17.
Ihe nlereanya dị aṅaa ka Jizọs setịpụrụ n’ihe banyere ime ndị na-eso ụzọ ya baptizim? (Ọma 40:7, 8; Mat. 28:19, 20; Luk 3:21, 22)
Gụọ Matiu 4:1-11.
Olee otú ojiji Jizọs jiri Akwụkwọ Nsọ mee ihe nke ọma si agba anyị ume ịmụ Bible mgbe niile? (Mat. 4:5-7; 2 Pita 3:17, 18; 1 Jọn 4:1)
Gụọ Jọn 1:29-51.
Ònye ka Jọn Onye Na-eme Baptizim gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha gakwuru, oleekwa otú anyị pụrụ isi ṅomie Jọn taa? (Jọn 1:29, 35, 36; 3:30; Mat. 23:10)
Gụọ Jọn 2:1-12.
Olee otú ọrụ ebube mbụ Jizọs rụrụ si gosi na Jehova adịghị egbochi ezi ihe ịbịara ndị ohu Ya? (Jọn 2:9, 10; Ọma 84:11; Jems 1:17)
Mgbe ndị Farisii na ndị Sadusii bịakwutere Jọn, ọ katọrọ ha. N’ihi gịnị?
Jizọs gosiri nne ya na ọ bụzi Nna ya nke eluigwe ga na-agwa ya ihe ọ ga-eme, ọ bụghị yanwa.